Qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Galmudug oo gadooday – Damqo
Qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Galmudug oo gadooday
Somali soldiers patrol in Wadajir distri...Somali soldiers patrol in Wadajir district South of capital following heavy fighting as Somali government and African Union troops battled a powerful militia warlord in a bid to disarm him, on August 15, 2014 in Mogadishu. Somalia's government launched a disarmament campaign earlier this month, with troops backed by the AU mission in Somalia (AMISOM) today fighting to seize weapons from militia leader Ahmed Dai. AFP PHOTO/MOHAMED ABDIWAHABMohamed Abdiwahab/AFP/Getty Images
Qaar ka mid ah ciidamadii ugu horeeyay ee daraawiishta Galmudug ayaa ka gadooday xiro ay ku jireen oo ku taalay Dhuusamareeb, waxaana ay gaareen degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud.
Ciidamadan oo ka mid ahaa Maleeshiyaad uu wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi kasoo aruuriyay Gaalkacyo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa xalay isaga baxay xiradii ay ku jireen oo ku taala Dhuusamareeb.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan oo wata Shan gaadiidka dagaalka ah ay u gadoodeen kadib khikaaf soo kala dhexgalay wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo xildhibaanada Galmudug ee Gaalkacyo laga soo doorto.
Xildhibaano iyo odayaal dhaqan ayaa la sheegaya inay u jihiysteen dhanka Galinsoor si ay usoo xaliyaa xiisadda ciidamada Gadooday iyo wasiirka Amniga Galmudug .
Ciidamadan ayaa ah ciidamadii ugu horeeyay ee loo tababaro daraawiishta Galmudug, waxaaba wasiir fiqi muddooyinkii ugu dambeeyay uu waday qorshe uu ku dhisay ciidamada Galmudug.
Previous Wararkii ugu dambeeyay weerar askar lagu laayay oo ka dhacay Shabeelaha Hoose
Next Shacab careysan oo maanta banaanbax ka dhigay Muqdisho
Ma jiraan caddeymo culus oo arrintaan laga soo bandhigay, balse waxaa muuqaneysa iney Al-Shabaab si fudud lacagaha uga helaan masuuliyiinta dowladda iyo ganacsatada.
Lacag lagu dul dhigay qof waliba oo galaya gudaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb
Jubbaland oo maalmo kadib si caro leh uga hadashay dil ka dhacay Kismaayo
Wararkii ugu dambeeyay Koox hubeysan oo dad shacab ah ku dilay Caabudwaaq
Madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo Muqdisho dib ugu soo laabtay